ब्यपारमा नाफा घाटाको हिसाव गर्ने ४२ वर्षिय राजेश्वर साह लाई आजभोली मतदाता कार्यकर्ता र अन्य शुभेच्छुकहरुका दर्जनौ सवाल,अनेकौ जिज्ञासा बिभिन्न खालका सूचना सुन्ने बिश्लेषण गर्ने ,चुनावी कार्यक्रममा सहभागि हुने ,कार्यक्रम मिलाउने रिसाएका कार्यकर्तालाई फकाउने ,खटाउन भ्याई नभ्याई छ ।
बिद्यालयको बिद्यार्थी हुदा नै बहुवर्वा भाठामा रहेको माविबाट नेपाल बिद्यार्थी संघमा संगठीत भएका साहमा डाक्टर बन्छु भन्ने थियो । तर बिज्ञान संकायमा प्रविणता पत्रको अध्ययन सकेपछि साहको यात्रामा एउटा मोड आयो डक्टर बन्ने सपना छाडेर उनी ब्यपारमा लागे । ब्यपारमा साहले पछि पर्केर हेर्नु परेन । दिन प्रतिदिन सफलताका पाइला चुम्दै एउटा शिखरमा पुगे ।
ब्यापारमा एउटा कद बनाई सकिएपछि साहको जीवनमा एउटा मोड आयो जसले उनलाई फेरी राजनीतिको यात्रामा लगायो । राजनीतिक जीवनमा उनले कम्ता संघर्ष गर्नु परेन । राजनीतिमा अविश्वास असहयोग कतिपय अवस्थामा अपमान समेत ब्यहोर्नु प¥यो । तर राजनीति हो भन्दै हरेस नखाएका साहले अन्तत पार्टीको बिश्वास हासिल गरे र अहिले उनी पर्सा क्षेत्र नं २ को प्रदेश सभा १ मा उम्मेदवार भएका छन ।
उनै साहसंग इसीमाना डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश - सम्पादक
ब्यपारमा राम्रो गरिरहनु भएको मान्छे राजनीतिमा किन आउनु भयो ? राजनीतिक सत्ता र शक्तिको चाहले तपाईलाई पनि छोयो होइन ?
कुरा त्यस्तो होइन । राजनीतिक सत्ता शक्तिको चाह होइन । तर राजनीति गर्दै जादा त्यो प्राप्त हुन सक्छ भन्ने कुरा स्वभाविक हो । तर त्यो नै मेरो चाहना होइन । पार्टीले दिने जिम्मेवारी पुरा गर्दै जादा आइपर्ने अवसरहरु उपयोग गर्ने कुरालाई अन्यथा मान्नु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । तर मुल कुरा त के हो भने बिद्यार्थीहुदा देखीनै नेपाल बिद्यार्थी संघसंग आवद्ध भएको थियो ।
यो राजनीतिक यात्राको शुरुवात थियो । ब्यापारमा लाग्दा राजनीतिक जीवन सक्रिय बनाउन सकिन तर पछिल्लो पटक ०६४ को सम्बिधान सभाको निर्वाचन भन्दा अगाडि देखी सक्रियतालाई बढाएको छु । पार्टीले दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीता पूर्वक निवाह गर्दै आएको छु । अहिले पार्टीले निर्वाचन क्षेत्र नं २ को प्रदेश सभा १ को उम्मेदवार बनाएको छ । मेरो तर्फबाट सम्पूर्ण रुपमा राम्रो गर्ने प्रयास गर्छु ।
ब्यपारमा आफनो रोजीरोटी ब्यवस्थापनको आधार हो पेशा हो । त्यो गर्दै गर्दा सामाजिक कामहरुमा मेरो सहभागिता रहेको थियो । राजनीति पनि समाजसेवाको एउटा राम्रो माध्यम हो । राजनीति आम रुपमा जनताको हितका निम्ति गरिने बिषय हो । त्यसकारण सामाजिक सेवाकोलागि राजनीतिक क्षेत्र मेरो रुचीको बिषय बन्यो । जनसेवाका निम्ति राजनीतिक रुपमा मैले पाउने अवसर पद र प्रतिष्ठाको प्रयोग गर्छु । मैले जे पाउछु त्यो जनता र क्षेत्रको बिकासकालागि समर्पित हुने छ ।
अनि सेवा गर्नकालागि तपाई राजनीतिक शक्ति र सत्ता किन चाहियो र ?
राजनीतिक सत्ता किन चाहियो भन्ने कुरामा मेरो सिम्पल धारणा छ । बृहत जनताको हितमा काम गर्ने योजना पो म संग छ तर त्यसलाई आपूर्ती गर्ने स्रोत र साधन ब्यक्तिगत रुपमा लगाउन सकिदैन । बृहतर जनताको हितका निम्ति निष्ठापूर्वक इमान्दारीतपूर्वक स्रोतको परिचालन गर्न सत्ता चाहिन्छ । नागरिकको जीनवनमा समृद्धी ल्याउने मेरो अपेक्षालाई पुरा गर्न ब्यक्तिको सम्पतीले मात्र सकिदैन ।
ब्यक्तिको सोच र ब्यवहारले मात्र सम्भव हुदैन । त्यसमा वतावरण कानून ,जनशक्ति सबैको आवश्यकता हुने भएकोले राजनीतिक सत्ताले जनताबाट अनुमोदित हुने भएकोले त्यसका माध्यमबाट सेवा गर्न सजिलो हुन्छ त्यो पदमा पुगेर मैले पदको दुरुपयोग गर्ने होइन निष्ठापूर्वक सेवा नै गर्छु मेरो यो प्रतिवद्धता रहेको छ ।
तपाईलाई जनताले आफनो मत दिन्छन भन्ने के कारणले लागेको छ ?
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा ६० वर्षदेखी नेपाली जनताले चाहेको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरि संघीय लाकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सम्बिधान जारी भयो । त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौ । एउटा यो कार्यान्वयनको कुरा छ । राजनीतिक रुपमा धेरै कुरा सेटल भएको छ तर नेपालको गरिवी अन्त्यको सवाल जटिल बन्दै गएको छ ।
गरिवी अन्त्यकोलागि आर्थिक उर्पाजनका कामहरु आवश्यक छ । आर्थिक उत्पादनकोलागि कानूनी जटिलताहरुको अन्त्य मुलुकमा शान्तिपूर्ण अवस्थाको निर्माण स्थिर सरकार आवश्यक छ । यो गर्नकालागि नेपाली कांग्रेससंग योजना र खाका छ । त्यो पुरा गर्न नेपाली जनताको लडाईबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न अधिानयकवादबाट मुलुकलाई जोगाउनकालािग नेपाली कांग्रेसले काम गर्छ मुलुकको राष्ट्रीय राजनीतिका सन्दर्भमा मेरो ऐजेण्डा मेरो पार्टीले तय गरेका माथि उल्लेखीत बिषय नै हुन ।
स्थानीय तहमा मेरो प्रदेश सभाको समग्र बिकास बाटो घाटो पुल पुलेसो ऐतिहासिक स्थलहरुको संरक्षण पर्यटकहरुकोलागि गन्तब्य केन्द्र रोजगार मुलक उधोगहरुको स्थापना गर्ने कुराहरु मेरा एजेण्डा हुन । यि एजेण्डाहरु जनताको दैनीक जीवनसंग सरोकार राख्ने भएकोले र नेपाली कांग्रेसले बोलेको कुरा पुरा गर्ने भएकोले जनताको मत मैले पाउछु र बिजय हासिल गर्छु ।
तपाई चुनाव लड्ने क्षेत्रका समस्याहरु के छन ?
मेरो क्षेत्र आम रुपमा नेपालका अन्य क्षेत्र जस्तै कतिपय समस्याहरु समान खालका छन । अन्त गरिवी छ मेरो क्षेत्रमा पनि गरिवी छ । पछौटेपन छ , सामाजिक जीनवशैलीमा पनि बिभेद छ ,रोजगारीको अभाव छ , कृषि परम्परागत छ ।
अव त आफूलाई खानको लागि उत्पादन गर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौ । पर्यटकहरुकालागि आकर्षणको केन्द्र त तर त्यसको निर्माण भएको छैन । सुरक्षाका बिषय छन यस्तै समस्याहरु जसलाई समाधान गरेर अगाडि बढनु पर्छ ।
समस्याको पहिचान गरिसक्नु भएको छ । समाधान गर्ने स्रोत साधन कसरी परिचालन हुन्छ ?
महत्वपूर्ण सवाल गर्नु भयो । समस्याहरु पहिचान भएपछि समाधान गर्ने आधार पनि फेला पर्छ । एउटा डक्टरले रोग पत्ता लगाए पछि ठिक उपचार गर्छ । अनी बिरामी निको हुन्छ । ठिक त्यस्तै तरिकाले हामीले मोटामोटी समस्या देखेका छौ समस्याहरु अरु पनि होलान ।
समस्या र त्यसको प्रभावका बिषयको आकलन गरि समस्याहरुको हलकालागि प्रथमिकता तय गरेर काम गर्छौ । सीमीत स्रोत र साधनमा धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्ने चुनौतीलाई स्वीकार गरेरै काम गर्छौ । अर्को कुरा राज्य सरकाले बनाउने नीतिमा हाम्रो समस्यालाई हल गर्नकालागि पहल गर्छौ आर्थिक स्रोतलाई बढी भन्दा बढी मेरो क्षेत्रमा ल्याउनेमा मेरो ध्यान हुने छ ।
जनताको साथ र सहभागितामाहामी हाम्रा समस्याहरु हल गर्दै कृषिको आधुनीकीकरण,रोजगारमुलक उधोगको स्थापना त्यसकोलागि कानूनी जटिलताहरुको अन्त्य पर्यटकीय क्षेत्रको बिकास र निर्माणको काम गर्छौ ।
अन्त्यमा आफनो प्रदेश सभाका मतदातालाई के भन्नुहुन्छ ?
सामाजिक समावेशीकरणलाई ब्यहारमा उतार्ने छौ । सामाजिक न्यायमा आधारित शासन ब्यवस्थाको निम्ती पहल गर्छौ । सबैको इज्जत प्रतिष्ठा हित सम्मानपूर्ण अवस्था बनाउनकोलागि पनि नेपाली कांग्रेसले जित्नु आवश्यक छ ।
यो आवश्यकतालाई आम मतदाताले बुझनु हुने छ र नेपाली कांंग्रेसको रुख चिन्हमा मतदान गर्न आम मतदाताहरुलाई अपिल गर्छु ।
टुप्पी कसेर पढ्ने बाहुन सीडीओ भयो भनेर नपढ्नेले रीस गरेर हुन्छ ?
बैचारिक रुपमा बोकेको एजेण्डाका आधारमै साथीहरुले मलाई छान्नुहुन्छःदास
महानगरको बिकास र समृद्धिका योजना हामीसंग छ, यो नै हाम्रो जीतको आधार हो : अन्सारी
भारतबाट रेल सञ्चालन गरेपछि त्यहाँबाट आएर गाउँपालिकामा आएकाहरुबाट पोजिटिभ देखिएको हो । मैले महानगरपालिकालाई दिएको सहयोग होईन मेरो आप्mनो गाउँपालिकाका जनताको सुरक्षाका लागि सहयोग गरेको हो ।
अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ भनेर मानवीय मूल्यलाई बिर्सन हुदैनः प्रधानमंत्री ओली
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी सङ्क्रमणबाट बच्न नेपालमा सुरक्षाका उपाय अवलम्बनसहित रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका काम भइरहेका छन् । महामारी बिफल पार्न सरकारले हवाई र स्थलमार्गबाट आवागमन रोकेर गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी गरेको छ भने परीक्षणको दायरालाई जिल्ला–जिल्लामा विस्तार गरेको छ
शुरूमा कोरोना संक्रमण भएको कसरी थाहा पाउनु भयो ?
कोरोना रोकथाममा हामी एशियामै सन्तोषजनक अवस्थामा छौँः मन्त्री ढकाल
विश्वका शक्तिशाली मुलुकलाई समेत हल्लाइरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि नेपालमा पनि सरकार र सम्बन्धित पक्षबाट उच्च प्राथमिकताका काम भइरहेका छन्
विश्वका अधिकांश सरकार र नागरिक विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा फैलिइरहेको कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यतिबेला हातेमालो गरिरहेका छन्
पौडी खेल्दा एक बालकलाई बगायो
बीरगंज महानगरपालिका वडा नं १९ बिन्दवासीनीका १२ बर्षय बालकलाई तिलावे नदीले बगाएको छ । उनी बेपत्ता रहेको सशस्त्र प्रहरीका पर्साका प्रहरी उपरिक्षक दीपेन्द्र कुंवरले जानकारी दिनु भयो ।
समाचार लेखेकै कारण पत्रकार पोख्रेललाई धम्की ,धम्की दिनेलाई कारवाही गर्न पत्रकार महासंघको माँग
समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई दूब्र्यवहार गर्नेलाई कारवाही गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ बारा शाखाले माँग गरेको छ
बिन्दवासिनीको गाउँ सभा सम्पन्न : शिक्षा, स्वास्थ्यमा जोड
पर्साको बिन्दवासिनी गाउँ पालिकाको गाउँ सभा आज सम्पन्न भएको छ
पुत्र बियोगको पीडामा रहेका कुर्मीलाई नगरप्रमुख साहको सहयोग
बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख नितेन्द्र साहले पीडामा परेको एक परिवारलाई आइतवार आर्थिक सहयोग गर्नु भएको छ ।